TAFA-PIFIDIANANA : Eric Rajaonary : Mamy Richard Radilofe -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Eric Rajaonary : Mamy Richard Radilofe
10/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanohy ny fitsidihana tany Toliara
Anisan’ireo mijery akaiky ny tontolo ambanivohitra, ny kandidà Eric Rajaonary. Omaly dia nitsidika tany Toliara ity kandidà laharana faha-17 ity. Toa ny fanaony dia misy hatrany ny fihaonana sy tafatafa amin’ireo mponina amin’ny toerana lalovany. Anisan’ny vohiziny hatrany ireo vina entiny hampandroso an’i Madagasikara sy fampatsiahivina ireo vahoaka fa Tanindrazana iombonana i Madagasikara. Teny filamatr’ity kandidà ity ny hoe « Eny fa roso », « sahia manova ».
Tamin’ireo toerana rehetra nandalovany, na mialohan’ny fampielezan-kevitra, na amin’izao fotoana, dia manamarika hatrany Eric Rajaonary fa isan’ny fanoitran’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny sehatry ny fambolena.
Mamy Richard Radilofe
Amin’ ny maha mpisolovava ny kandidà Mamy Richard Radilofe, izay natolotry ny antoko RDS, na ny Roso Demokrasia Sosialy, dia lohalaharana anatin’ny programan’asan’izy ireo ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna. Miara-dalana amin’io fametrahana ny tany tan-dalàna io, dia eo ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, ahafahan’ireo eny ifotony mandroso. Tsy ho diso anjara anatin’ny programan’asan’ny kandidà Mamy Richard Radilofe anefa ny fifandraisana ara-barotra any ivelany, izay hampanarahana ny filana sy ny tombontsoa azon’ny firenena. Tanjona hoy ity kandidà ity ny hahatanteraka ny firenena sambatra, noho ny hery hoentiny sy asehony, niainga tamin’ ny faniriana hampandroso sy hanasoa ny firenena malagasy
Ravatomanga sy Rajoelina : Diso kajy
Noho ny tahotra hiatrika ny fifidianana fihodinana faharoa, dia nolotoin’i Mamy Ravatomanga, sy Andry Rajoelina, ary nalaina baraka tamin’ny alalan’ireo tompomenakeliny i Mbola Rajaonah, Filoha mpanorina, sady Tale jeneralin’ny RLM Communication. Tsaho sy lainga maro ...Tohiny
Fifidianana : Ireo kandidà “clowns”…
Kidnapping tetsy Behoririka : Misy hetsika ilàna vola be?